विविध | गृहपृष्ठ | Page 327
काठमाडौ (अस) । संसदीय सुनुवाइ समितिले चार देशका लागि राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरेको छ । अस्ट्रेलियाका लागि महेश...
प्रअ र व्यवस्थापन समिति अध्यक्षविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं (अस) । अख्तियारले फर्जी भरपाईका आधारमा तलब भुक्तानी गर्ने कैलाली ताम्चास्थित नवदुर्गा राष्ट्रिय निमाव...
फलफूल र तरकारीमा विषादी परीक्षण स्थगित
काठमाडौं । भारतीय फलफूल र तरकारी आयात गर्दा विषादी परीक्षण गर्ने नीति तत्काललाई सरकारले स्थगित गरेको छ । भारती...
खडेरीका कारण केरा उत्पादनमा कमी
on: May 17, 2014 विविध
जेठ ३, चितवन । खडेरीका कारण चितवनमा यसपटक केरा उत्पादनमा कमी आएको छ । करीब ७५ प्रतिशतले केरा उत्पादनमा कमी आएको केरा व्यवसायी समिति चितवनले जानकारी दिएको छ । समितिका उपाध्यक्ष विष्णुहर...	बिस्तृतमा
उदयपुर ३, जेठ । देशकै सबैभन्दा ठूलो सिमेण्ट उद्योगको रूपमा रहेको उदयपुरको जलजलेमा अवस्थित उदयपुर सिमेन्ट उद्योग चार दिनदेखि बन्द भएको छ । उद्योगको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने मेसिनमा गडबडी भएपछि...	बिस्तृतमा
व्यावसायिक जडीबुटी खेतीबाट रू. चार करोड आम्दानी
on: May 15, 2014 विविध
जेठ १, इलाम । जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा किसानले लगाएको व्यावसायिक जडीबुटीबाट यो वर्ष रू. तीन करोड ९५ लाख आम्दानी गरेका छन् । बर्सेनि खेती विस्तार गरेर किसानले यसबाट मनग्य आम्दानी गर्न थालेका...	बिस्तृतमा
महसुल नबुझाउनेको धाराको लाइन काट्ने
on: May 13, 2014 विविध
सप्तरी ३०, वैशाख । खानेपानी संस्थान सप्तरीले खानेपानीको महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने अभियान थालेको छ । लामो सयमदेखि बक्यौता नतिरेका ग्राहकलाई पटकपटक सूचना जारी गरे पनि अटेर गरेका...	बिस्तृतमा
इटहरीमा रङ्गशाला निर्माण प्रारम्भ
on: May 12, 2014 विविध
वैशाख २९, इटहरी । सरकारले सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पूर्वाञ्चलमा गर्ने निर्णय गरेपछि इटहरीमा रङ्गशाला निर्माण कार्यले मूर्त रुप लिएको छ । राज्यले विनियोजन गरेको रकममध्ये यो वर्ष इटह...	बिस्तृतमा
किसानलाई ६० हजार माछाका भुरा वितरण गरिने
on: May 11, 2014 विविध
वैशाख २८, म्याग्दी । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय म्याग्दीले व्यावसायिक रूपमा माछापालन गर्ने किसानलाई ६० हजार भुरा वितरण गर्ने भएको छ । मत्स्य विकास कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाको पात्लेखेत,...	बिस्तृतमा
अनुदान रकम परिचालन गरी माछापालन
अनुदान रकम परिचालन गरी माछापालन वैशाख २८, कञ्चनपुर । माछाको आयात प्रतिस्थापन गरी स्थानीय उत्पादनमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले कञ्चनपुरमा सञ्चालित ‘फिस मिसन...	बिस्तृतमा
बाख्रापालन क्षेत्रमा पिपिआर खोप
बाख्रापालन क्षेत्रमा पिपिआर खोप वैशाख २८, इटहरी । जिल्ला पशुसेवा कार्यालय सुनसरीले यो वर्ष सघन बाख्रापालन क्षेत्रमा एक लाख मात्रा पिपिआर खोप वितरण गरेको छ । बाख्रामा लाग्ने पिपि...	बिस्तृतमा
उडान नहुँदा लुक्लामा पर्यटक अलपत्र
वैशाख २५, सोलुखुम्बु । वैशाख ५ गते हिमपहिरोका कारण भएको दुर्घटनापछि आरोहण त्यागेर फर्कन बाध्य पर्यटकहरू लुक्लामा पुनः रोकिएका छन् । मौसम खराबीका कारण विगत पाँच दिनदेखि उडान अवरुद्ध हुँदा पर्...	बिस्तृतमा